Vidio Ọrụ Na-ewebata kọmputa NeXT na 1988 | Esi m mac
Video nke Ọrụ na-ewebata kọmputa NeXT na 1988
Otu n'ime akụkọ ndị a kacha ekwukarị n'akụkọ ihe mere eme nke Steve Jobs 'Apple, doro anya mgbe a chụrụ ya n'ọrụ ma ọ bụ tinye ya n'ụzọ dị nro, a kpọrọ ya ka ọ hapụ ụlọ ọrụ nke ya. N'oge ahụ na mgbe ọ dị afọ 30, o kpebiri ịnọgide na-azụ ahịa ya na ụlọ ọrụ kọmputa. ịmepụta ụlọ ọrụ NeXT Computer Inc.. Maka ụlọ ọrụ ọhụrụ a nke Jobs mepụtara, ọ kpọtara mmadụ asaa n’ime ndị ọrụ ya mbụ na Apple: Bud Tribble, George Crow, Rich Page, Susan Barnes, Susan Kare na Dan’l Lewin.
NeXt malitere na 1988 the: The Cube, kọmputa anọ dika aha ya na-egosi na n'agbanyeghị na ọ bụ eziokwu enwetaghị ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ire ahịa, ọ ga-ewepụ Ọrụ ọzọ na Apple n'ihi usoro sistemụ akpọrọ NeXTSTEP. Na 1993 na mgbe ahia “nke cube” abụghị nke kacha mma ma ọ bụ nke a tụrụ anya ya, NeXT gbanwere ịrara onwe ya nye sọftụwia ma melite sistemu arụmọrụ arụpụtara na kọmputa, Akụkọ NeXT kwụsịrị na oge oyi nke 1996 mgbe Apple Computer kwupụtara nzụta ya maka $ 429 nde iji melite sistemụ arụmọrụ nke kọmputa Macintosh site na ịgbakwunye sọftụwia NeXt.
Nke a bụ Ihe ngosi vidio zuru ezu nke ihe ngosi kọmputa NeXT na 1988. Anyị adọọla aka na ntị na nke a bụ ogologo ngosi ma ọ bụrụ na ị naghị adịkarị njikere ịhụ nkwupụta ogologo oge, nke a nwere ike iburu gị ntakịrị:
O doro anya na Steve Jobs bụ ọkachamara na-ere ahịa na vidiyo a ị ga-ahụ etu o si ebute ihe ngosi. N'ụzọ ezi uche dị na ọ bụ banyere ire ngwaahịa na ọtụtụ n'ime anyị maara banyere ya nkà nke Ọrụ na nke a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Video nke Ọrụ na-ewebata kọmputa NeXT na 1988
Kate Winslet meriri BAFTA maka ihe nkiri ọhụụ banyere Steve Jobs
Apple ga-ahapụ ngwa ngwa ọhụrụ maka Apple TV ọhụrụ gị